စပိန်: အားလုံး shimmers သောတိုင်းပြည်တွင်ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်ပါသည်
စတင်ပြုလုပ်ခြင်းမူဝါဒကစပိန်နိုင်ငံရေးစပိန်: အားလုံးနိုင်ငံရဲ့အလိုဆန္ဒကြောင့် shimmers အတွက်ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်ပါသည်
စက်မှုထုတ်လုပ်မှုလုံ့လရှိသူကိုကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးတောင်းဆိုနေပြီဖြစ်သောစပိန်မှာ "တက်စေ ... " "ပုံပျက်တဲ့အလုပ်ကိုသတ်လေ့ရှိတယ်။
14 ဒီဇင်ဘာလ 2017 မမြင်နိုင်သော စပိန်နိုင်ငံရေး 37
သူတို့ကပဲ ... ကိုယ့်ကိုတနေ့ပြန်လာရမယ်အရပ်သားသေဆုံးမှု, ထိုအချိန်အများစုကိုပေမယ့်မရှိတော့အစီအစဉ်များတည်နေရာဆွဲရန် sappers နှင့်တိုင်းတာဖို့အသုံးပြုညံ့ဖျင်းသောထိန်းချုပ်မှုဗိုလ်ခြေနှင့် siquieran အားဖြင့်သိမ်းကျုံးထားကြ၏မိုင်း exploit, အကြောင်းပြောဆိုဘယ်တော့မှ ဘဝတွေကိုဒိုင်းသောသူတို့လယ်ကွင်းကိုဖြတ်ကူးရန်, အညီထိုက်တန်သည့်အဖွဲ့အစည်းများခံရသောသူတို့အားစိတ်ဒဏ်ရာများ၏တွေကမှားစရာဆိုင်းဘုတ်များနှင့်အတူအနီး 1400 800 သေဆုံးမှုနှင့်ဖြတ်တောက်မှုမှာခန့်မှန်းခြေ, သူတို့ထဲကအတော်များများသည်သူ၏ဥပဒ်တစ်ခုဆေးတစ်လက်အဖြစ်အသေခံပိုမိုနှစ်သက်ကြလိမ့်မယ်။
သူတို့ကထက်ပိုမို 100 သန်းမြှုပ်မိုင်းများနှင့် detonators ယန္တရားများ footfall သို့မဟုတ်ဘဝသူတို့ကိုတားမြစ်တည်ရှိစိမ်းဖြင့်အလောင်းချဉ်းကပ်ဖို့အဆင်သင့်အားဖြင့်ရှိပါတယ်, အများဆုံးအကြောင်းကြားဆိုတတ်ကြ၏။ ကျွမ်းကျင်သူများကအထက်ပါ curtailing 64 အန္တရာယ်နိုင်ငံများနှင့်သည့်အချိန်တွင်မဆိုတင်ပို့ခြင်းနှင့်ဖြန့်ဝေဘို့သိမ်းထားတဲ့အတွက်အခြားပမာဏကိုညီမျှရုပ်ကြွင်းဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။
ထုတ်လုပ်သူ, ဥရောပပေးသွင်းနိုင်ငံတွေ, ဗြိတိန်, ပြင်သစ်မှရည်ညွှန်းပြီးဒီအချိန်အများဖြစ်ကြ၏, တိုင်းပြည်ကမ္ဘာပေါ်မှာလက်နက်သတ္တမအကြီးဆုံးတင်ပို့ရာတွင်ဆွီဒင် (တိုင်းပြည်ဟာဝိရောဓိနိုဘယ်လ်ဆုချီးမြှင့်ပေးအပ်), ပေါ်တူဂီနှင့်စပိန်။
Bressel မီးမောင်းထိုးပြမှတိကျသောနည်းပညာ, သင်္ခါရExtremeñasအတူ။ Anti-ပုဂ္ဂိုလ်များမြှုပ်မိုင်းများထုတ်လုပ်အထူးပြုကုမ္ပဏီများအဖြစ်ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်, ပေါက်ကွဲမှုများနှင့်ပေါက်ကွဲမှုဖြစ် Alaveses Burgos ၏စပိန်သမဂ္ဂ,အကောင်းဆုံး 186 ကဏ္ဍ၏ဤအမျိုးအစားအတွက်စာရင်းကုမ္ပဏီများ၏ရှည်လျားသောစာရင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့။
, ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်စိုက်ပျိုးခြင်းပြီးနောက်, သငျသညျ, အသီးအသီးအရောင်းအဝယ်အတွက်စျေးနှုန်းကိုသတ်မှတ်အဖြစ်နောက်ပိုင်းမှာပယ်အလုပ်လုပ်အတွက် add, ဒါပေမယ့်ဝမ်းနည်းစွာဟာပထဝီနိုင်ငံရေးဧရိယာပေါ် မူတည်. တိုင်းလေးခုသို့မဟုတ်ငါးထောင်, ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးစာချုပ်များအဘို့, ကြုံတွေ့နေကြရသည်နှင့်ကွယ်လွန်ရမယ် နှစ်ယောက်ကအရမ်းပြင်းထန်ဒဏ်ရာများထည့်သွင်းစဉ်းစားအတူထွက်ခွာသွားခဲ့သည်။
ယခုနှစ် 2015 ခုနှစ်တွင်စပိန် 3.720% 8% Arab Emirates, သြစတြေးလျမှ 38%, ရန်, အီးယူနှင့်နေတိုးသွားရာ, အောထွက်လာသည် 18 နှစ်ပေါင်းလည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့်အနည်းဆုံးရောင်းချခြင်းအပေါ် 15 သန်းထက်€ပိုပြီးကြေညာ ဗင်နီဇွဲလား၏ဖြစ်ရပ်၌ရှိသကဲ့သို့ဆော်ဒီအာရေဗျနှင့်အခြားလျော့နည်းငွေပမာဏမှ 10% ။
1995 ကနေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသူတို့ရဲ့အဆင့်ကိုနှင့် ပတ်သက်. စပိန်အတွက်ကာကွယ်ရေးကဏ္ဍ၏အခြေအနေသည်ကုန်သွယ်ရေးကိစ္စကိုဝန်ကြီးအဖွဲ့အကြောင်းပိုမိုစိုးရိမ်ပူပန်ပစ္စည်းကိရိယာများremodeló၏ကမ်းလှမ်းမှုတစ်ခုလက်ခံရရှိသည့်နိုင်ငံများသို့အဆိုပြုခဲ့ရသည်တိကျစွာကတည်းကအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ရလဒ်များကိုစဉ်းစားရနိုင် ထို့အပြင် EADS ဥရောပအုပ်စုတစ်စုအကြီးဆုံးရှိပါတယ်ဖြစ်ခြင်း, ထို့အပြင်အာကာသကိုထိခိုက်ကုန်း, အဏ္ဏဝါ, ကွန်ပျူတာ, လျှပ်စစ်အပါအဝင် R & D နှင့်နိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အရေးပါသည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု, အဓိပ်ပာယျသည့်လက်နက်ရိုးရာပေးသွင်းအတူရှင်းလင်းစွာယှဉ်ပြိုင် အညွှန်းကိန်းဦးစားပေးမဟာဗျူဟာမြောက်မိတ်ဖက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး။
အားလုံးကုမ္ပဏီများမှနီးပါး 250.000 ထံအပျနှံဖို့ကိုက်ညီတဲ့အရာ၏, လူတွေ 21.000 မှအနီးအနားရှိ template ကို add နီးပါး 46.000 ယူရိုသန်း, အမိမြေကာကွယ်ရေးအပေါ် 2200 အာရုံစိုက်ရောက်ရှိ 375 သန်းတင်သွင်းခြင်းနှင့် 890 သန်းတင်ပို့, ကာကွယ်ရေးကဏ္ဍတွင်ပေါင်းစပ်ပြီး ယူရို။
သငျသညျမသာတွေ့မြင်ကိုအကောင်းဆုံးစပိန်သံလွင်ဆီ၏အကြီးမားဆုံးပို့ကုန်လုပ်ငန်းရှင်များတရုတ်ပုန်းအောင်းဦးဆောင်တင်သွင်းနှင့်စစ်ရေးထုတ်ကုန်များစျေးကွက်ရှာဖွေရေးပြုပြီတစ်ခုဖြစ်သည်သည့်အခါကောင်းသောဝက်ပေါင်ခြောက် knockdown စျေးနှုန်းများမှာထားရကြောင်း, အီတလီဖြစ်ကြသည်ခွင့်ပြုနိုင်သကဲ့သို့ နောက်ဆုံးဖြန့်ဝေလိုရာခရီးတစ်ခုတိုးချဲ့ခြင်းဈေးကွက်ထဲမှာအောင်မြင်သောဖြစ်လိမ့်မည်။
မဆိုသံသယရှိခဲ့လျှင်, ငါတို့သည်စပိန်မှာလည်းသေခြင်းကိုအသိအမှတ်ပြုအမာခံများ၏အထူးလျှော့စျေးလက်နက်နှင့်နည်းပညာကိုထောက်ပံ့ပေးနှင့်လျှို့ဝှက်၏တွေအများကြီးနဲ့ကိုရောင်းဝယ်ခြင်းကျွမ်းကျင်မှု mask လုံလောက်သည်, မိမိစိုးရိမ်ပူပန်ကြောင်း၏မိန့်ခွန်းနှစ်ဦးစလုံးပိုကောင်းစေပါတယ်ကြောင်းအတည်ပြု လေ့ကျင့်ခန်း protocol ကိုတင်းကြပ်စွာလူ့အခွင့်အရေးနှင့်ကမ်ဘာပျေါတှငျငွိမျးခမျြးရေး။ တစ်ဦးက interpellations နှင့် "စံချိန်တင်ချွတ်" သူတို့သည်ငါတို့အနီးအနောက်နိုင်ငံများနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ပူးပေါင်းအမြဲပေါ်လာသည်, အလုပ်အကိုင်အများ၏နောက်ဆက်တွဲဆုံးရှုံးမှုနှင့်အတူအခြားကြားဝင်မဟုတ်ဘူးသောဂန္အဖြေ
နိဂုံးချုပ်မှာတော့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအတိုင်းအတာအပေါ်ကာကွယ်ရေးများ၏စျေးကွက်အလွန်အမင်းပြောင်းလဲနေသောဖြစ်ပြီး, အချို့သောလင်းအန္တရာယ်နှင့်တာဝန်များအတွက်မကြာခဏလူရဲ့ရှယ်ယာရှင်အချိန်တွင်နောက်ဆုံးပြင်ဆင်ခဲ့သည်သို့မဟုတ်သက်သာရာနေကြသည်ကတည်းက 186 စပိန်ကုမ္ပဏီများ, တစ်ဦး, အသုံးဝင်သောလက်တွေ့ကျတဲ့နှင့်အမျိုးအစားကွဲပြားခြားနားပြောင်းလဲနေတဲ့လည်းမရှိပါဝင် အချိန်မှန်, ဖြန့်ဝေပြီးနောက်, စုဆောင်းခြင်းနှင့်ကိုယ်စားလှယ်များလက်အောက်ခံအန္တရာယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုမ္ပဏီများသည်အဖြစ်ပြုမူသည်နောက်တဖန်အဘယ်သူမျှသဲလွန်စထားခဲ့ပါ။ ငါဘယ်တော့မှပိုကောင်း, ညာ ?.
15 မှ 2017 ဒီဇင်ဘာလ 10: 43
ငြိမ်းချမ်းရေးတစ်ရှုပ်ထွေးပြဿနာဖြစ်ပါတယ်ထိန်းသိမ်းပါကအကြမ်းဖက်ဝါဒတိုက်ဖျက်ရေးမှကြွလာသောအခါ (သူတို့က, အချိန်အများစုကိုပြုမူမတိုင်မီ), သို့သော်စပိန်ဥရောပထောက်လှမ်းရေး၏အကောင်းဆုံးအသင်းနှင့်အတူအနည်းငယ်နိုင်ငံတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
15 မှ 2017 ဒီဇင်ဘာလ 10: 47
Edwin Jaime သူ says:
15 မှ 2017 ဒီဇင်ဘာလ 20: 40
စပိန်မကြာသေးမီကအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးအများအပြားအပြစ်မဲ့၏လူများ, intromiciones ပြည်နယ်စစ်ပွဲများများအတွက်ကြီးမားသောနိုင်ငံဖြတ်ကျော်၏စုပေါင်းအကျိုးစီးပွားပေးဆောင်ခဲ့ကြ
Renny Villarroel သူ says:
17 မှ 2017 ဒီဇင်ဘာလ 03: 32
သူများသည်ဒုံးကျည်များ puigdemon အဘို့ဖြစ်ကြ၏
ကားလို့စ် Cornejo သူ says:
20 မှ 2017 ဒီဇင်ဘာလ 17: 27
မွေးဖွား Matanceros matanceros သေဆုံးပါလိမ့်မယ်။
Melvincoreaduarte Coreaduarte သူ says:
26 မှ 2017 ဒီဇင်ဘာလ 11: 07
ဤအစက္ကန့်အတွင်း umanos မူကြမ်းမှန်လျှင်, အဘယ်ကြောင့်အများအပြားလက်နက်များဖျက်ဆီးဖို့ construlle ယောက်ျားသည်ဖြစ်ကောင်းတူညီတဲ့လူကိုငါတို့သည်ဘုရားသခင်၏အသက် ,, တဦးတည်း၏ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကလေးတွေ umanos မဟုတ်ကြသလော
အဘယ်ကြောင့်အကြီးအ trans ဆိုတဲ့ q nasionales သတ်ပစ်သောဤကြီးမားသော imensos အပိုငျးအထုတ်လုပ်, လူသတ်မှုအသွေးကိုသွန်း inosente,
သာယာဝပြော umano စပါးရိတ်ရာကာလ VASICOS aya များအတွက်မြေဆီအစေ့သို့မရောက်မှီတိုင်အောင်အဘယ်သူမျှမပိုကောင်း travajan ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့
သင်သည်တတ်နိုင်အာရှာ + ,, သူတို့အားဆငျးရဲသားလူသတ်သမားများနှင့်လက်နက်ထုတ်လုပ်သူ "", နေထိုင်ပြီးဘဝတွေကိုယူပြီးသူကိုသာအသကျရှငျသညျဘုရားသခငျ Ay saven အာရှာလက်အောက်တွင်ကြီးမားသောစစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေက Vien ဖျက်ဆီးဖို့
Sebastian de la Llana သူ says:
17 မှ 2018 ဇန်နဝါရီလ 17: 51
တစ်ဦးအဘိဓါန် regale မှသင်တို့၏ဘုရားသခင်မေးပါ, သင်စပိန်ဘာသာစကား၏အကောင်းတစ်ဦးဆရာပေးဆောင်
28 မှ 2018 ဇန်နဝါရီလ 01: 54
သင်ပေါင်းလည်းမကောင်းတဲ့, ထိုအငြင်းအခုံကအရေးကြီးတယ်, ကြီးသောလူသားဖတ်ခြင်းသို့မဟုတ်ရေးရန်နှင့်စာတတ်မြောက်သူမြားထကျပိုကောငျးအတွေးအခေါ်များရှိစေခြင်းငှါမရနိုင်ပါ။ ခွဲခြားဆက်ဆံမှုမှားယွင်းနေသည်
17 မှ 2018 ဇန်နဝါရီလ 18: 25
သငျဒီမှာနောက်ထပ်ကမ္ဘာကို ,, ဘဝတှငျအသုံးသိမြင်များကို ပြင်ဆင်. အဘယျ GET
ထိုအခါအကြီးအတစ်လောကလုံးအဘိဓါနျသင့်ရဲ့ခေါင်းတလားထဲမှာသင် Hechen သင်သည် Tigo တောင်ပံသင်္ချိုင်းနှင့်အတူယူပါလိမ့်မယ်
Araca Cesar Ugarte သူ says:
23 မှ 2018 ဇန်နဝါရီလ 00: 29
လိမ္မာပါးနပ် Luque သူ says:
26 မှ 2018 ဇန်နဝါရီလ 09: 30
28 မှ 2018 ဇန်နဝါရီလ 02: 06
cres Anti-ခရစ်ယာန်လူတို့နှင့်အတူအကောင်းဆုံးကိုစဉ်ဆက်မပြတ် injenuo ဖြစ်တယ်ဆိုရင်အိုကေအဘယ်သူမျှမက c စာတ ablate နိုင်ပါတယ်
Jorge Oak သူ says:
13 မှ 2018 ဇန်နဝါရီလ 22: 39
စပိန်မရှိတော့ဖြစ်နေဆဲအကြမ်းဖက်ပြည်နယ်ကြောင်းမဆိုသံသယရှိခဲ့လျှင်။ X ကိုရာခိုင်နှုန်းခန့်ကျန်ရှိနေသောကြောင့် 19 နေတိုးတပ်ဖွဲ့ဆီးရီးယားနှင့်အီရတ်တွင်ကြောက်မက်ဘွယ်သောအကွဲဟာ ISIS command ကိုထောက်ပံ့သည်။
Marco Kahara သူ says:
15 မှ 2018 ဇန်နဝါရီလ 20: 40
ဒါဟာငါ candelita ဖြတ်သန်းဘို့အနည်ထိုင်ပါလိမ့်မယ် Miraflores အတွက်လဲသူတို့၏အမျိုးအပင် puntica တဦးတည်းဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ
ရောဘတ်ကင်မရာ Otton သူ says:
16 မှ 2018 ဇန်နဝါရီလ 02: 07
ဤရွေ့ကား Galician လက်စွဲဆုံးရှုံးခဲ့ရခြင်းနှင့်ယခုသူတို့ကိုပစ်ရန်မည်သို့မသိ။
Manya Luch သူ says:
17 မှ 2018 ဇန်နဝါရီလ 02: 09
အဆိုပါက q အများဆုံးဆင်းရဲသောသူကိုချစ်သားတို့က q လက်နက်များတည်ရှိမယ်လို့များမှာခံရတည်ဆဲဘာအဆိုးဆုံးက q ခဲ့သည်
ဆာဂျီယို Villar သူ says:
17 မှ 2018 ဇန်နဝါရီလ 07: 07
ဒါဟာပုံမှန်အားဖြင့်ဒဏ်ငွေသို့မဟုတ်လိုင်စင်ရုပ်သိမ်းခံသူကိုအလုပျသမားများမှာ ... ကောင်းသောဖြစ်နဲ့တဲ့မော်တော်ကားပေါ်ဆေးလိပ်မသောက်သို့မဟုတ်အရက်သောက်သို့မဟုတ်မိုးသည်းထန်စွာအခွန်ရပ်တန့်ဖို့ကွဲပြားခြားနားသောအစီအမံများနှင့်အတူလူအတင်းမယ်လို့ ..
အစိုးရများထင်ကတည်းကလူသားမျိုးနွယ်အပေါ်အရောင်းနှင့်လက်နက်ဝယ်ယူမှုရအခက်စတင်ရန်အချိန်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ ... ?
အစိုးရများခွေုံလိမ်လည်မှုဖြစ်ကြောင်း ... ... ကိုရောင်းသေနတ်များသန်းပေါင်းများစွာထောင်ပေါင်းများစွာ၏တွေနဲ့သန်းပေါင်းများစွာသောကိုသတ် ..
Walter Olivera သူ says:
18 မှ 2018 ဇန်နဝါရီလ 01: 11
11 မှ 2018 ဖေဖော်ဝါရီလ 02: 05
11 မှ 2018 ဖေဖော်ဝါရီလ 02: 18
သင်တန်းက q ၏ဟုတ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်အာဇာနည်ပြုပါ
11 မှ 2018 ဖေဖော်ဝါရီလ 02: 20
ထို့အပြင်ဒံယေလ ... ငါတို့သည်ဤလောကအဘယ်သူမျှမဖြေရှင်းသွားမပေးဆွေးနွေးခြင်းက q သဘောတူ ??
Juan Daria သူ says:
18 မှ 2018 ဇန်နဝါရီလ 18: 08
Maxi Alvarez သူ says:
20 မှ 2018 ဇန်နဝါရီလ 13: 18
အဆိုပါ **** သို့ရမ X ကို
Walter mostaceros သူ says:
20 မှ 2018 ဇန်နဝါရီလ 15: 00
ရီးယန်းကျွန်းဆွယ် tarsis ကြောင်းကိုသတိရပါအံ့ဩခြင်းမပါဘူး
ဖာနန်ဒိုက Javier Rodriguez Acosta သူ says:
20 မှ 2018 ဇန်နဝါရီလ 17: 37
Rodolfo Rodriguez သူ says:
23 မှ 2018 ဇန်နဝါရီလ 14: 13
ထက်ပိုမို 100 သန်းမြှုပ်မိုင်းများနှင့် detonators ယန္တရားများ footfall သို့မဟုတ်ဘဝသူတို့ကိုတားမြစ်တည်ရှိစိမ်းဖြင့်အလောင်းချဉ်းကပ်ရန်အဆင်သင့်။ ကျွမ်းကျင်သူများကအထက်ပါ curtailing 64 အန္တရာယ်နိုင်ငံများနှင့်သည့်အချိန်တွင်မဆိုတင်ပို့ခြင်းနှင့်ဖြန့်ဝေဘို့သိမ်းထားတဲ့အတွက်အခြားပမာဏကိုညီမျှရုပ်ကြွင်းဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ဒီအပေါ် EYE ချီလီဘိုလီဗီးယားနယ်စပ်နဲ့ဖြစ်ပျက်
ဟူဂိုဟာနန်ဒက်ဇ် သူ says:
26 မှ 2018 ဇန်နဝါရီလ 20: 42
Juan Carlos Maldonado သူ says:
27 မှ 2018 ဇန်နဝါရီလ 11: 52
သာအစုလိုက်အပြုံလိုက်ပျက်စီးခြင်းအဘို့ဤအ esiste တဲ့အကြောင်းရင်းများအတွက်အစွမ်းထက်တိုက်ပွဲများဖြစ်ကြသည်
27 မှ 2018 ဇန်နဝါရီလ 12: 59
မေးတစ်ခုတည်းသောလက်နက်များသို့မဟုတ်ဒုံးကျည်အဆုတ် xq ဓားကိုဖြစ်နှင့်အပြစ်မဲ့လူတွေကိုသတ်ပစ်နှင့်ကမ္ဘာဂြိုဟ်ကိုဖျက်ဆီးတော်မဟုတ်ဘူး
Miguel Scanavino သူ says:
27 မှ 2018 ဇန်နဝါရီလ 18: 34
10 မှ 2018 ဖေဖော်ဝါရီလ 02: 21
Uopaaaa !!! သငျတို့သကြိုးစားနေဒီဘယ်မှာ ????
11 မှ 2018 ဖေဖော်ဝါရီလ 00: 24
သငျသညျမှာထားပူတင်ထုတ်ပယ်ဖို့ဆီးရီးယားတွင်စပိန် ISIS လက်နက်များ provehia လျှင်သူ 44 2016 သန်းမှ 161 2017 သန်းရောင်းဖို့သုံးစွဲရှိရာဆော်ဒီအာရေဗျဤလက်နက်များကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရမည်ဖြစ်သည်။ စပိန်လက်နက်ဆီးရီးယားယီမင်လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုမျိုးဖြုတ်သုတ်သင်မှု။ DNA ကိုခဲထဲမှာလူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှု, ဇာတိအမေရိကန်တွေရဲ့လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုသူတို့နှင့်အတူရောက်ရှိလစ်ဗျားအတွက်ပြင်သစ်လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုအစုလိုက်အပြုံလိုက်သတ်ဖြတ်နှိမ်နင်းခြင်းနှင့်ယခုခဲ့ပါဘူး! ဒါပေမဲ့သူတို့မကစားပါလိမ့်မယ်ကြိုတင်မထိဘူးသူပြောင်းလဲမှုတရားသူကြီး Garzon ၏ခြေရာကိုနင်းလိုကျပါမညျလိုသည်။
7 မှ 2018 မေလ 01: 36
ဒါကြောင့် Read နှင့် anlicelo
7 မှ 2018 မေလ 02: 43
လူကြီးလူကောင်း။ ဆိုးကျိုးသုံးသပ်ရေး။ အမှတ် C. ဒံ။ အကောင့်။ မေး။ အေ Is စီးပွားရေးလုပ်ငန်း။ round ။ ဆိုလိုသည်မှာ။ : D .. Armas ။ ကြွလာတော်မူ။ ပို။ စစ်ပွဲများ။ အဲဒီမှာ။ ၌တည်၏။ အဆိုပါ။ Planet ကို။ ဒါဟာဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကရောင်း။ ပို။ လက်နက်များဃ။ အရာအားလုံး။ အမျိုးအစား။ အဘယ်သူသည်။ C. အကျိုးရယူပါ။ အဆိုပါ။ နိုင်ငံများ။ တီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ Y က .. နိုင်ငံများ။ ညံ့ဖျင်းသော။ တစ်ဦးတည်း။ အဆိုပါ။ သေလွန်သောသူတို့သည်။ သူတို့ဟာထားပါ။ အဘယ်အရာကိုမျှ။ ဃရရှိ
10 မှ 2018 မေလ 01: 03
10 မှ 2018 မေလ 20: 48
14 မှ 2018 မေလ 17: 37
11 ဒီဇင်ဘာလ 2018 7
ဒီartículoTweetVOXအခန်း II ကိုမျှဝေပါ - မဲမှကာကွယ်ရေး, လုံခြုံရေးနှင့်နယ်စပ်ရေးရာရွေးကောက်ပွဲဥပဒေများ၏စတင်ခြင်းနှင့်ရွေးကောက်ပွဲစနစ်များ၏ Transparency ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနှင့်အတူ Next ကိုအခန်း III ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအလုံးစုံတို့အဘို့တူညီရကျိုးနပ်သည် [ ... ]